Boobe Oo Weeraray Xukuumadii C/Raxmaan Tuur Oo ku Masaalay waxba Tarayaal la eeday | Somaliland.Org
Boobe Oo Weeraray Xukuumadii C/Raxmaan Tuur Oo ku Masaalay waxba Tarayaal la eeday
January 16, 2013	Waa Taariikh diiwaanka madow galaysa oo uu gacantiisa ku astaystay Wasiirkii hore ee warfaafinta Boobe Yuusuf Ducaale ee xilka laga qaaday oo si indho adayg ah u xaqiray kaalintii iyo wax-qabadkii xukuumaddii u horaysay ee Somaliland ee uu Hoggaaminayay ALLE ha u naxariistee Marxuum- C/Raxmaan Axmed Cali (Tuur) oo uu ku tilmaamay in la eeday oo aanay waxba qaban.
Boobe waxa uu sidaasi ku sheegay maqaalkii shanaad ee waxa uu ugu yeedhay “Xeer-dejin iyo Xukuumad is xambaar ah” oo uu si taxanne ah ugu soo qoro qaar ka mid ah warbaahinta maxaliga ah.
Boobe Yuusuf Ducaale oo ku qadhaabta Mujaahid dhaartay, haddana waxa uu u badheedhay inuu istiigad mariyo libintii iyo horusocodkii ay samaysay dawladdii ay hoggaaminayeen Hoggaamiyeyaashii SNM ee C/Raxmaan Tuur iyo Xasan Ciise Jaamac, kuwaasi oo bud-dhigay nidaamka dawladnimo ee Somaliland isla markaana qabtay shirar badan oo lagu saacidayay hanaankii nabadeynta beelaha Somaliland.
Waxa uu kaligii xariif kala masuugay Hoggaankii xukuumadaasi inay ahaayeen kuwii ALLE ku guuleeyay xorayntii dalka ee xarakadii shacbiga ahayd iyo halgankii wadaniga ahaa ee SNM hormuudka u ahayd.
Aan sadarro kooban ka soo qaadato sida uu ugala bakhaylay xukuumaddii C/Raxmaan Tuur libinteedii oo uu ka dhigay mid aan waxba qaban, waxaanu qoraalkiisaasi ku yidhi “Muddadan 18/5/1991kii-18/5/1993kii, ee uu Cabdiraxmaan Axmed Cali oo loo yaqaannay Tuur hayay hoggaaminta SNM iyo dalkaba, wax badan oo qabsoomay ma jirin. Waxay ahaayeen laba sannadood oo kala-guur ku suntanaa oo ku dhammaaday dagaallo iyo colaado sokeeye oo la eeday oo aan la mahadin.”
Ayaan darradda dhacday Boobe meelna qoraalkiisa kagamuu hadlin dedaaladii naf-hurka ahaa iyo juhdigii ay xukuumadaasi gelisay shirarkii nabadda ee ay ku qabteen degmadda Sheekh ee lagu soo afjaray dagaalkii ka dhacay Berbera 1992-kii isla markaana loogu gogol xaadhayay shirweynihii labaad ee beelaha Somaliland ku yeesheen magaaladda Boorame sanadkii 1993-kii ee ay sida dimuqraadiyadda ahayd u wareejiyeen Hoggaankii dalka xili aad u adkaa.
Waxa kale oo uu si xasad iyo naxli ku jiro indhaha uga qarsaday sidii xukuumaddii C/Raxmaan Tuur ay iskugu shuqlisay inay beelihii darafyadda ku qanciyaan in la iska iloobo dagaaladii oo laga wada shaqeeyo qaranimadda Somaliland ee walaalaha lagu yahay.
Waxaan xasuusinayaa Boobe murtidii ahayd “Waxba yaanu xeerna imarin xoolana I siine’, xaash’e nin libin kaa xisdiyay xumihii waa yaab’e.” balse yeelkadii iyo aragtidii.
Hadda, ninka sidaasi isu carab tiraya ee xaqiraya saaxiibadii waa Boobe Yuusuf Ducaale, oo CV-giisu ka soo bilaabmo, kuna dhammaado SNM oo uu nusqarnigaa aynu qaranka nahayba waxa kaliya ee uu ku faanaa tahay SNM oo uu marka la qiimeeyo ka ahaa ashkhaastii ugu saamaynta yaraa.
Boobe oo Taariikhda u yaqaana aragtidiisa waxa uu isla qormadii shanaad ee maqaaladiisa kaga been sheegay Aasaaskii Haay’adda sirdoonka qaranka oo uu la shir yimid inuu aasaasay Daahir Rayaale Kaahin, waxaanu isku dayay inuu marin haabaabiyo shacbiga. Waxaanu ka warqabin in aasaaskii Ha’yadaasi ay ka mid ahayd Haay’adihii dawliga ahaa ee tisqaaday xiligii Marxuum- Maxamed Ibraahim Cigaal.
Aan soo qaato Boobe oo qoraalkiisa kaga hadlaya aasaaskii Haayadaasi, waxaanu yidhi “Daahir Ra’yaale Kaahin, waa uu ka duwanaa dhammaan Madaxweynayaashii Somaliland soo maray: mid dhintay iyo mid noolba. Iyada oo ay Laantii Baadhista Denbiyada ee ‘‘CID’-du ay iska sii koraysay ayuu ku guulaystay in uu dhiso shebeked Sir-doon oo la yaab leh oo gude iyo dibadba laga dareemay.”
Waxa qoraalkiisa ka muuqata inaanu Boobe wax badan ku kala saari Karin waajibaadka shaqo ee CID-da iyo Haay’adda Sirdoonka qaranka.
Dabuubta Boobe ka soo yeedhay, waxay noqonaysaa dhacdo taariikhiya, waxaanay ummaddu ku suntanaysaa sida uu u xiqray asxaabtiisii SNM, hase yeeshee aragtidiisaas tabani ma masixi karto taariikhdii halgameed, hoggaamineed ee Marxuum- C/Raxmaan Tuur iyo Mujaahid Xasan Ciise oo uu ku masaalay waxba tarayaal la eeday.
Cismaan Maxamuud Khayre
Previous PostWasiirka Daakhiliga oo gudo-galay xal u helida khilaafaadka SaylacNext PostMaayarka Ceel Afweyn Oo Xilkii La wareegay	Blog